thu han soe – Page 620 – The News Post
တရုတ် နိုင်ငံ အေ န နဲ့ အမေ ရိ ကန် နိုင် ငံ မှ ထိုင်ဝမ် ကို စစ်လက် နက် ရောင်းချ ခဲ့ တဲ့ Lockheed Martin ကုမ္ပဏီ ကို အေ ရး ယူ မှု ဆောင် ရွက်သွား ဖို့ ဆုံးဖြတ်
တရုတ် နိုင်ငံ အနေ နဲ့ အမေရိ ကန် နိုင်ငံ က ထိုင်ဝမ် ကို စစ်လက် နက် ရောင်းချ ခဲ့တဲ့ Lockheed Martin ကုမ္ပဏီ ကို အရေး ယူ …
July 16, 2020 By thu han soe News
နဂါး ဖမ်း ပွဲ ကျင်း ပတော့ မည် လား (သို့) ဘယ်ြေ ပးမှာ လဲ မစ္စတာ ရှီ တိုက်မှာ လား ညှိ မှာ လား ရှော င်မှာလား အရှုံးပေး မှာလား ဘာ ဆက် လုပ် မှာ လဲ
နဂါးဖမ်း ပွဲ ကျင်းပတော့မည် လား (သို့) ဘယ်‌ပြေးမှာ လဲ မစ္စ တာရှီ တိုက်မှာလား ညှိမှာ လား ရှောင်မှာလား အရှုံးပေးမှာလား ဘာဆက်လုပ်မ လဲ တ ချို့က ဒီလိုပြောတယ် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းကအိန္ဒိယ …
ပွဲစား ကြီး ပူ တင် နဲ့ အသဲေ ကာင်း လို့ ပွဲေ တာင်းေ နသော သာေ ကာ န ဂါး (သို့) (၂၀၂၀) သ ည် ကမ္ဘာ့ အေ ရး မြန်မာ့ အရေး အဆုံြး ဖတ် ဖြစ် မည် လား
ပွဲစားကြီး ပူတင် နဲ့ အသဲကောင်း လို့ ပွဲတောင်းေ နသော သာကော နဂါး (သို့) ၂၀၂၀သ ည် ကမ္ဘာ့ အရေး မြန်မာ့အရေး အဆုံးဖြတ် ဖြစ်မည်လာ့း မြန် မာ့နိုင်ငံရေးမှာ မအလကိုယ်တိုင် …
အငယ် ထား လို့ ကွဲေ န တဲ့ ယော က်ျား မှ အကြီး ကို ပြန်ေ ပါင်း ချင်၊ ပြန် မပေါင်းေ တာ့ လည် ပင်း ကို ဓား နဲ့ထိုး တဲ့ အဖြစ်
အငယ်ထားလို့ ကွဲနေ တဲ့ ယောက်ျားက အကြီးကို ပြန်ပေါင်း ချင်၊ ပြန်မပေါ င်းတော့ လည်ပင်း ကို ဓားနဲ့ထိုးတဲ့အဖြစ် မယားငယ်ထားနေ တာကြောင့် မပေါင်းနိုင်လို့ ကွဲပြီးမှ ယောကျာင်္းဖြစ်သူက ပြန်ပေါင်းဖို့ အကြိမ် အကြိမ် …
ပိုက် ဆံ တစ် ကျပ် မှ မရှိ ဘဲ နဲ့ စ တင် လုပ် နိုင် တဲ့ စီးပွားေ ရး လုပ် ငန်း (၆) မျိုး
ပိုက်ဆံ တစ်ကျပ်မှ မရှိ ဘဲ စတင်လုပ် နိုင် တဲ့ စီးပွားေ ရး လုပ် ငန်း (၆) မျိုး တ ကယ်တော့ ဒါဟာ သင့်ရဲ့ မူပိုင် ရောင်းကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက် …
July 16, 2020 By thu han soe Knowledge
ဆရာ မင်းသိမ်း ခိုင် (ရွှေရမ်းထူးလင်း) ၏၂၀၂၀ ဇူလိုင် လ (၁၆) ရက်နေ့ မှ(၂၃) နေ့ အ တွင်း ဆောင် ရန် ၊ ရှောင်ရန် ယတြာ ပြုရ န်ဟော စာတမ်း
ဆရာ မင်းသိမ်း ခိုင် (ရွှေရမ်းထူးလင်း) ၏၂၀၂၀ ဇူလိုင် လ (၁၆)ရက် မှ(၂၃)အ တွင်း ဆောင်ရန် ၊ ရှောင် ရန် ယတြာ ပြုရန်ဟောစာတမ်း ဆရာမင်းသိမ်းခိုင် (ရွှေရမ်းထူးလင်း)၏၂၀၂၀ ဇူလိုင်လ (၁၆)ရက်မှ(၂၃)အတွင်း …
သခင် နဲ့ ကွဲကွာ ခဲ့ပေ မယ့် ကိုယ့်န ည်း ကိုယ့်ဟ န် နဲ့ သခင် အား ပြန်ရှာဖွေနိုင်ခဲ့ တဲ့ ခွေးလေး
သခင် နဲ့ ကွဲကွာ ခဲ့ပေ မယ့် ကိုယ့်န ည်းကိုယ့်ဟ န် နဲ့ သခင် ကို ပြန်ရှာဖွေ နိုင်ခဲ့ တဲ့ ခွေးလေး ခွေး ကလေးတွေဆို တာ လူတွေရဲ့ အချစ်ဆုံး …
ချစ် သူ က ဝ လွန်း လို့ ဆိုပြီး မနာလို သူ များ ရဲ့တိုက် ခိုက် မုန်းတီြး ခင်းကို ခံနေ ရ တဲ့ စုံတွဲ
ချစ်သူ က ဝလွန်းလို့ ဆိုပြီး မနာလိုသူတွေ ရဲ့တိုက်ခိုက်မုန်းတီးခြင်း ကိုခံနေရ တဲ့ စုံတွဲ Social Media ဟာ တစ်ချို့သောသူတွေအတွက် တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဆိုးဝါးစွာပြစ်တ ဝဖန်ခံနေရတဲ့ နေရာတစ်ခုလို့ပြောရလောက်အောင်ပါပဲ ။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ Linh …
မြန်မာ့ နည်း မြန်မာ့ ဟန်နှ င့် အိမ်ထောင် သည် အ အိုေ တွ အပျိုလေးေ တွ လို ပြ န်ဖြစ်စေ ဖို့နည်း လ မ်းေ ကာင်း ကို သြိ ပီးကြပြီ လား?
မန်မာ့ နည်း မြန်မာ့ဟန်နှ င့် အိမ်ထောင်သည် အ အိုတွေ အပျိုလေးတွေ လို ပြန်ဖြစ်ဖို့နည်းလ မ်းကော င်းကို သိပြီးကြပြီလား? မိန်းမကိုယ် ပြန်လည်ကျဉ်းစေဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေ မသုံးချင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မမတွေ ရှိပါ တယ်။ …
ဂျပ န်နိုင်ငံ တွင် နေ ထိုင် စဉ် ငယ် စဉ် က လိင် ပိုင်း ဆိုင်ရာေ စ်ာကား မှု ခံ ခဲ့ ရ တယ် ဆို တဲ့ “မယ်ရီ”
ဂျပန်နိုင်ငံ မှာ နေထိုင် စဉ် ငယ်စဉ် က လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော် ကားမှု ခံခဲ့ ရတယ် ဆို တဲ့ “မယ်ရီ” တစ်မူး ထူးခြားတဲ့ အသံလေးနဲ ပရိသတ်တွေရင်ထဲရောက်ရှိခဲ့တဲ့ နိုင်ငံကျော် အဆိုတော် မယ်ရီကတော့ …
July 16, 2020 By thu han soe Celebrity
Page 1 … Page 619 Page 620 Page 621 Page 622